Kugadzira PC Yemukati Yekunze Kuwana | Martech Zone
Kugadzira PC Yemukati Yekunze Kwekunze
Muvhuro, July 7, 2008 Chishanu, January 11, 2013 Douglas Karr
Nekugamuchirwa kwemasvingo emoto uye mairaira, kubatanidza kune imwe komputa kuburikidza neInternet rave dambudziko chairo. Kana iwe uchida kumisikidza komputa yako kuti iko kwekunze kuwana kuitike, kune zvimwe zvakadzama kumisikidza shanduko zvaunofanira kuita kune yako network.
Wana IP yako Kero kana DynDns Kero
Nhanho yekutanga kukuwana iwe kuwana kero yako. Munyika yeInternet, izvi zvinozivikanwa seIP Kero uye zvinogona kuteverwa pasi pasi.
Tsvaga kana uine Static (isingashanduke) kero ye IP kana Dynamic (kuchinja) IP kero. Mikana ndeyekuti kana iwe uri DSL kana kunyangwe DSL Pro kuti iwe une simba IP kero. Kana iwe uri paBusiness DSL kana iyo Cable Modem, iwe unogona kunge wakamira.
Iyi ndiyo kero yeIP iyo yakapihwa kune yako yekupinda poindi kune yako network Kana iwe uri wakamira, hapana kunetseka. Kana iwe uri Dynamic, saina kune sevhisi senge Dynamic DNS. Mazhinji mairaira emazuva ano anokwanisa kutaura neDynDNS kuchengetedza yako IP kero kuvandudzwa. Zvino, pane kupa mumwe munhu IP yako kero, iwe waizovapa iwo domain senge findme.homeip.net.
Kana iwe usiri kuziva yako yekunze IP Kero, unogona kushandisa saiti senge Ndeipi Kero Yangu IP kuti uwane.
Ping yako DynDns kana IP kero uye uone kana iwe ukawana mhinduro (Vhura kumusoro "Command Prompt" kana "Terminal" uye Mhanya: ping findme.homeip.net
Kana iwe ukasagamuchira mhinduro, ungangoda kugonesa Pinging mune yako router kumisikidza. Tarisa kune yako router zvinyorwa.
Gonesa PORT Kutumira mune yako Router
Zvino zvatava nekero yako, zvakakosha kuti uzive chii musuo kupinda yako musha kuburikidza. Izvi zvinozivikanwa sePORT pakombuta. Mafomu akasiyana anoshandisa maPORT akasiyana, saka zvakakosha kuti isu tine PORT chaiyo yakavhurwa uye kuendeswa kune komputa yako. Nokusingaperi, ruzhinji rwema routers ane zvese zviteshi zvakavharwa saka hapana munhu anogona kupinda mune yako network.
Kuti iyo PC sosi ikwanise kutaura neiyo PC yekuenda, yako Router inoda kunanga traffic kune yako PC.
Takataura nezve kukosha kweiyo Static IP Kero ye network yako, ikozvino zvakakosha kuti uve neStatic IP Kero yePC yako pane yako Yemukati Network. Tarisa kune yako Router zvinyorwa zvekuti ungagadzirisa sei iyo static IP Kero kune yako Yemukati PC.
Zvichienderana nerudzii rwechikumbiro chaunoshuvira kubatana nacho, uchafanirwa kugonesa PORT kutumira kubva kune yako Router kuenda kuPC yako yemukati static IP Kero.
HTTP - kana iwe uchida kumhanyisa dura rewebhu kubva paPC yako yemukati uye nekuita kuti riwanikwe nekunze, PORT 80 inoda kuendeswa mberi.
PCAnywhere - 5631 uye 5632 inoda kutumirwa.
VNC - 5900 inoda kuendeswa mberi (kana kana iwe wagadzira chakasiyana chiteshi, shandisa icho icho).
Bvumira Zvirongwa zveFirewall paPC yako
Iwo iwo PORTS awakatumira kuPc yako anoda kuti zvibvumirwe muPC yako Firewall software. Tarisa kune ako firewall zvinyorwa uye maitiro ekugonesa kunyorera uye / kana madoko aunoda kuve nawo kunze.
Kugadzira shanduko dzekumisikidza hadzisi nyore, asi kana zvese zvanyatsoshanda nemazvo iwe unofanirwa kuwana yako PC kuburikidza nekushandisa kwesarudzo yako kubva chero kwaunoda.
CHERECHEDZA: Zvisinei nechero chirongwa chauri kushandisa, ita shuwa kushandisa zita rekushandisa rakaoma uye password! Hackers vanofarira kusevha netiweki vachitsvaga akavhurika madoko kuti vaone kana vachigona kuwana uye / kana kudzora iwo maPC. Pamusoro pezvo, iwe unogona zvakare kudzora IP kero iwe yauchazopa kuwana kwazviri.
Domain Yakachinjirwa kuMarkettechblog.com
Maodzanyemba Smoosier Tech Kirabhu